DF iyo Raskambooni oo heshiiyay
29 Dec 29, 2012 - 6:30:55 AM
Hogaamiyaha Raaskambooni Sh. Axmed Madoobe iyo Wasiirka Arimaha Gudaha DF ayaa labaduba sheegay inuusan jirin khilaaf u dhexeeya DF iyo Raaskambooni oo si wadajir ah uga qaybqaatana qabsashadii Magaalada Kismaayo.
Sh. Axmed Madoobe oo koox wariyeyaal kula hadlay Kismaayo Jimcihii shalay ayaa sheegay inuusan jirin khilaaf u dhexeeya DF iyo kooxda uu hogaamiyo, isagoo ku eedeeyay warbaahinta inay faafiyeen warar aan sal iyo raad lahayn.
"Khilaaf u dhexeeya DF iyo Maamulka Kismaayo ma jiro, waayo halkan waxaa nala jooga wasiiro ka socda Dowlada Somalia" ayuu yiri Sh. Axmed Madoobe oo intaas ku daray in Maamulkiisu uu ku qanacsan yahay inuu howlaha gobolka la wadaago DF.
Wasiirka Arimaha Gudaha DF Cabdikariin Xuseen Nuur Guuleed ayaa isagoo kula hadlaya warfidiyeenka garoonka diyaaradaha ee Kismaayo maanta [Dec, 29] wuxuu sheegay in la dhameeyay khilaafkii u dhexeeyay DF iyo Raaskambooni, hadana ay si wadajir ah u wajahayaan howlaha Qaranka.
"Maamulka gobolka waxaan kala hadalnay arimo badan waxaan ka mid ahaa khilaaf horay u jiray, kaasoo aan ka heshiinay isku aragtina ka noqonay" ayuu yiri wasiirka oo sheegay in sidoo kale maamulka ay kala hadleen xaalada dadka ku nool gobolka Jubada Hoose.
Intaas kadib wasiirku wuxuu hay'adaha samafalka ugu baaqay inay gargaaraan dadka ku dhibaateysan magaalada Kismaayo iyo Deeganada kale ee Gobolkaas ay kaga sugan tahya dowlada iyo ciidamada ay isbahaysiga la leedahay.
"Hay'adaha Gargaarku waa inay howlahooda ka bliaabaan Kismaayo si ay shacabka ku nool gobolka oo dhan u caawiyaan, dadweynaha Kismaayana waxay diyaar u yihiin inay idin soo dhaweeyaan" ayuu yiri wasiirka Arimaha Gudaha.
Wafdiga Dowlada oo ahaa mid heer wasiir ah Mudo laba maalmood ahna ku sugnaa Kismaayo ayaa dib ugu soo laabtay Muqdisho, waxaana wafdigan ka mid ahaa saraakiil ciidan iyo xildhibaano Baarlamaanka Somalia ka tirsan.